विश्वकप: २०१८ मा सर्वोकृष्ट दौडका उत्कृष्ट टोलीहरुको भिडन्त - Sadrishya
विश्वकप: २०१८ मा सर्वोकृष्ट दौडका उत्कृष्ट टोलीहरुको भिडन्त
बेदप्रसाद भुर्तेल Jul 10, 2018
फ्रान्स र बेल्जियमको बिचको खेल जारी विश्वकपको सबैभन्दा रोचक, प्रतिस्पर्धात्मक र महत्वपूर्ण मानिएको छ । यो सेमीफाईनलमा विश्वकपको एक पूर्व विजयी फ्रान्सले फाईनलमा स्थान बनाउँने नबनाउँने, मात्रै होईन नव फुटबल शक्तिको उदय हुने नहुने भन्ने पनि निर्णय गर्ने छ । यो प्रतिस्पर्धालाई फ्रान्सका प्रशिक्षक डिडियर देशच्याप र बेल्जियमका प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजको खेल रणनीतिको परीक्षणका रुपमा हेर्नेहरु पनि छन् भने रोमेलु लुकाकु र किलियन एमबाप्पेको खेल क्षमता तथा कौशलको मापनको रुपमा पनि हेर्ने छन् । यो प्रतिस्पर्धालाई एन्टोनी ग्रिजम्यान र ईडेन हजार्डकोविचको प्रतिस्पर्धा बुझ्नेको संख्या पनि कम छैन । चाहे जे सुकै किन नहोस्, आज विश्वकप २०१८ ले पहिलो फाईनलिष्ट पाउँने छ, जसले सम्भावत यो विश्वकप नै उचाल्ने छ ।
आज यो सेमीफाईनल मध्य राति ११ः४५ मा सेन्ट पिटर्सवर्ग रंगशालामा हुने छ । फ्रान्स र बेल्जियम बिचको खेलमा कुन टिम अब्बल र कुन टिमले पहिलो सेमीफाईनल जित्ने छन् ? यो प्रश्नको जवाफ सजिलै दिनु उपयुक्त नहोला । मनमा लागेको वा रुचाएको टिमको नाम फ्याट दिँदा सेमीफाईनल खेलिरहेको टिमको अवमूल्यन वा हचुवाको भरमा गरिएको आँकलन बन्न सक्छ । त्यसैले केही तथ्यमा आधारित भएर सम्भावित विजयी हुने टिम छाने, आफुले छानेको टिम हारे आश्चर्यजनक परिणाम मान्नु वा निरास बन्नु पर्दैन । यस लेखमा केही तथ्यहरुका आधारमा आजको सेमीफाईनल खेलमा आउँने सम्भावित परिणामको लेखाजोखा गरिएको छ।
बेल्जियम र फ्रान्स चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी टिम हुने । यी दुईले अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नै एक अर्काको बिच प्रतिस्पर्धा गरेर सन् १९०४ मेबाट सुरुवात गरेका थिए । यी दुईको पहिलो खेलमा दुवै टिमले ३–३ गोल हानेका थिए । ऐतिहासिक प्रदर्शनको आधारमा बेल्जियम फ्रान्सभन्दा केही अघि देखिन्छ । सन् १९०४ देखि हालसम्म फ्रान्स र बेल्जियमले ७३ वटा प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । यी ७३ प्रतिस्पर्धामध्ये फ्रान्स २४ वटा खेलमा जित हात पार्दा बेल्जियमले फ्रान्सलाई ३० पटक हराएको छ । विश्ककप प्रतियोगिता भित्रलाई हेर्ने हो भने, फ्रान्सको पल्ला धेरै नै भारी छ ।
हालसम्म विश्वकपका ६ खेलमा आमनेसामने गरेका छन् र फ्रान्सले ४ पटक जीत निकालेको छ । एक पटक बराबरी खेलेको फ्रान्सलाई बेल्जियमले एक पटक विश्वकप प्रतिस्पर्धामा मात दिएको छ । पछिल्लोपटक मेक्सिकोमा सन् १९८६ मा भएको विश्व कपमा फ्रान्सले बेल्जियमलाई ४–२ ले पराजित गरेको थियो । यी दुईको प्रतिस्पर्धामा सन् २००० यताको प्रदर्शनलाई आधार मान्ने हो भने बेल्जियम अगाडि देखिन्छ । २००० यता ५ खेलमा सबैभन्दा पछिल्लो २०१५ जुनमा खेलेको मैत्रीपूर्ण खेलसहित बेल्जियमले दुई जीत तथा दुई गोलरहित बराबरी खेलेको छ । साथै ईतिहासको प्रदर्शनको समग्र अवस्थालाई हेर्ने हो भने बेल्जियम अगाडि देखिन्छ ।
बेल्जियम र फ्रान्सले हालसम्म गरेको विश्वकपको प्रदर्शनलाई आधार बनाउँने हो भने फ्रान्स अगाडि छ । फ्रान्सले १९९८ को विश्वकप घरेलु मैदानमा जितेको थियो । उसले विश्वकपको २१ संस्करणमध्य १५ वटा विश्वकपमा ६४ खेल खेलेको छ । फ्रान्सले यी ६४ खेल मध्ये ५० प्रतिशत अर्थात ३२ वटा खेल आफ्नो पक्षमा पारेको छ, भने १३ वटामा बराबरी खेल्दा १९ वटामा पराजित भएको छ । एक विश्वकप उपाधी, एकपटक उपविजयता, दुई पटक तेश्रो स्थान र एक पटक चौथो स्थानको नजिता विश्वकपमा फ्रान्सले निकालेको छ । छ खेलमा समुह चरणबाट बाहिरिएको फ्रान्सले दुई पटकको विश् कपमा क्वाटरफाईनलमा पराजय व्यहोर्दै घर फर्किको थियो । उता बेल्जियमले हालसम्म १३ वटा विश्वकपमा सहभागिता जनाएको छ भने एक प्रतियोगितामा नाम फिर्ता लिएको थियो ।
बाँकी प्रतियोगितामा छनौट हुन सकेको थिएन । हालसम्म विश्वकपमा ४६ वटा खेल खेल्दा १९ वटामा जित निकालेको छ । त्यस्तै ९ वटामा बराबरी र १८ वटामा पराजित भएको छ । सन् २००० यता दुईपटक २००६ र २०१० मा छनौट नभएको बेल्जियमले सन् १९८६ मा सबैभन्दा राम्रो परिणाम निकालेको छ । सन् १९८६ मा सेमीफाईनल प्रतिस्पर्धा गरेको बेल्जियमले चौथो स्थान हासिल गरेको थियो । छपटक प्रथम राउण्ड वा समुह चरणबाटै फर्किएको थियो भने ४ पटक दोश्रो चरण अथवा समुह १६ को खेल खेलेको थियो । बेल्जियमले सन् २०१४ मा क्वाटरफाईनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो । यसरी विश्वकपको प्रदर्शनका हिसाबले वा २००० पछिका विश्वकपमा उपस्थितिका हिसाबले बेल्जियमभन्दा फ्रान्सअघि छ ।
जारी विश्वकपको प्रदर्शनलाई हेर्ने हो भने दुवै टोलीले सशक्त खेल खेलेका छन् । दुवैले कुनै पनि खेल गुमाएका छैनन् भने बेल्जियमको सत्प्रतिशत नतिजा आफ्नो पक्षमा निकालेको छ । फ्रान्सले समुह चरणमा डेनमार्कसँग गोलरहित बराबरी खेलेको थियो । यो विश्वकपमा दुवै टिमलाई आक्रमक टिम मानिन्छ । तर, आक्रमक खेलको आधार भने गोलपोष्टको क्षेत्रमा गरेको आक्रमण, लक्ष्यमा रहेको प्रहार, विपक्षी टिमका खेलाडीले रोकेको प्रहार तथा गोल संख्यालाई लिन सकिन्छ । जारी विश्वकपमा हाल सम्म यी दुवै टिमले पाँच खेल खेलेका छन् । जसमा बेल्जियमले एक एक गोल पेनाल्टी र आत्माघाती गोलबाट प्राप्त गोलसहित १४ प्रहार खेल विपक्षी गोलपोष्टमा छिराएको छ ।
उता फ्रान्सले गरेको ९ गोलमा २ पेनाल्टी र एक आत्माघाती गोलहरु समावेश छ । आक्रमकताको हिसाबमा बेल्जियमभन्दा फ्रान्स निक्कैपछि छ । फ्रान्सले जम्मा ५६ वटा प्रहार गरेर १९ वटा लक्ष्यमा राखेको छन् भने ९ गोल गरेको छ । बेल्जियमले ८५ प्रहार गर्दा ३३ लक्ष्यमा राखेको छ र १४ गोल गर्न सफल भएको छ । हानेको प्रहार गोलपोष्ट अर्थात लक्ष्यमा राख्न तथा जम्मा प्रहारलाई गोलमा परिणत गर्न बेल्जियमअघि छ भने लक्ष्यमा रहेको प्रहार गोलमा रुपान्तरण गर्ने क्षमता फ्रान्समा बढी देखिन्छ । त्यसमाथि बेल्जियम फ्रान्सभन्दा बढी रक्षात्मक खेल खेल्नेको टिमसँग प्रतिस्पर्धा गरेको देखिन्छ । बेल्जियमका २० प्रहार विपक्षी रक्षापंतिमा रहेका खेलाडीहरुले रोकेका छन् भने फ्रान्सका केवल १० प्रहार मात्र रोकिएको छ । यसरी हेर्ने हो भने बेल्जियमले फ्रान्सलाई कुनै मौका दिने छैन् ।
रक्षाको आधारमा फ्रान्स बेल्जियमभन्दा एक सुचकमा अघि छ । फ्रान्सले केवल ४ गोल खाएको छ भने बेल्जियमले ५ गोल । गोलकिपरको प्रदर्शन पनि बेल्जियमको राम्रो देखिन्छ । बेल्जियमका गोलकिपर कौर्टोईजको भन्दा फ्रान्सका गोलकिपर लरिसको कम गोल बचाएका छन् । तर, फ्रान्सले विपक्षीलाई डिबक्सभित्र फल खेलेर पेनाल्टी दिएको छ । यसले उसको रक्षापंतिमा दबाब बने गल्ति गर्ने संकेत गर्दछ । त्यस्तै फ्रान्सले एकै खेलमा ३ गोलसम्म खाएको छ भने बेल्जियमले २ गोलसम्म खाएको छ । रक्षाको आधारमा बेल्जियम र फ्रान्समा खासै भिन्नता नभएपनि फ्रान्सले दबाबमा गल्ति गर्ने देखिन्छ । फ्रान्सले बेल्जियमभन्दा बढी गल्तिहरुमा पनि गरेको छ जस्तो कि बढी पहेलो कार्ड खाने तथा फल गर्ने ।
खेलाडीहरुको प्रदर्शनका हिसाबमा आक्रमण गर्ने मुख्य दुई खेलाडी फ्रान्सका एमबाप्पे र ग्रिजम्यानले कुल ६ गोल गरेका छन् । दुवैले तीन तीन गोल गरेका छन् । ग्रिजम्यानले एक गोलका लागि सहयोग पनि गरेका छन् । उता बेल्जियमका दुई अग्रपंतिका खेलाडी ६ गोल गरेका छन् । जसमा लुकाकुले ४ तथा हजार्डले २ गोल गरेका छन् । तर, लुकाकुले थप एक गोलको वातावरण सिर्जना गर्दा हजार्डले २ गोलको लागि पास निकालेका छन् । यस अर्थमा फ्रान्सभन्दा राम्रो आक्रमणको जोडी बेल्जियमसँग छ । त्यस्तै फ्रान्सका गोलकिपर लरिसले ८ प्रहार बचाउँदा रक्षकले १० गोलका लागि गरेको प्रहार छेकेका छन् । बेल्जियमका गोलकिपर कौर्टोईसले १८ प्रहार बचाउँदा रक्षकहरुले २० वटा विपक्षी प्रहार छेकेका छन् । यसको अर्थ हो बेल्जियमको रक्षापंति तथा गोलकिपर फ्रान्सकाभन्दा चुस्त देखिन्छन् ।
जीतको सम्भावना फ्रान्सको बढी रहेको पश्चिममा मिडियाहरुले बताएको छन् । सट्टेबाजीहरुको बजारमा फ्रान्समा जुँवा राख्ने बढी छन् । पश्चिमा भिडियाकोअनुसार हाल चलेको दर फ्रान्स १.५, बेल्जियम २.० बराबरी २.३ रहको छ । जसको अर्थ १ डलर लगानी गरे फ्रान्सले जीते केवल १ डलर ५० सेन्ट हुन्छ भने बेल्जियमले जिते एक डलरको २ डलर हुन्छ । फ्रान्सले जीते रिर्टन कम हुनुको अर्थ जितको सम्भावना बढी हुनु हो । यो तथ्याङ्गलाई यदि सम्भावनाको रुपमा व्याख्या गर्ने होे भने फ्रान्सले ९० मिनेटभित्र जित्ने सम्भावना ३७ प्रतिशत छ, बेल्जियमले जित्ने सम्भावना ३३ प्रतिशत र बराबरी हुने सम्भावना ३० प्रतिशत छ ।
पश्चिमा मिडिया र एक दुई खेलाडीले देखाएको एकाध खेलको भरमा फ्रान्स विजयी हुन्छ भन्न सकिदैन । वर्तमान खेलको आधारमा बेल्जियममाथि देखिन्छ । तर, खेलको परिणाम पल्टाउँने नव प्रतिभा फ्रान्ससँग हुँदा उदयमान खेलाडी एमबाप्पे निरास भईहाल्छन् भन्न सकिदैन । खेलको नतिजा के हुन्छ ? भरे राति थाहा हुन्छ तर, हालसम्मको प्रदर्शनले बेल्जियमले पहिलो पटक फाईनल खेल खेल्ने अवस्था देखिन्छ । र, नयाँ ईतिहास विश्वकपमा कोर्ने लक्षण छ ।
आजको खेलमा नजर पर्ने खेलाडी
एन्टोनी ग्रिजम्यान, फ्रान्सः आज फ्रान्सका एमबाप्पे, पोग्बा, ग्रिजम्यान, टोलिस्सो, कान्टे, गिरौडमध्ये एक वा सोभन्दा बढीले फ्रान्सका लागि उत्कृष्ट खेल पस्कन सक्ने छन् । तर फ्रान्सका एन्टोनी ग्रिजम्यान यो सुचीका अग्रस्थानमा हुनेछन् । हालसम्म जारी वल्र्डकपमा ३ गोल गर्दै एक गोलका लागि पास निकालेका ग्रिजम्यान हाल २७ बर्षका छन् । एथ्लेटिको म्याड्रिडका स्ट्राईकर ग्रिजम्यानले फ्रान्सको राष्ट्रिय टिमबाट सन् २०१४ देखि खेल्दै ५९ वटा म्याचमा २३ गोल गरेका छन् । ग्रिजम्यान जारी विश्वकपको पाँच प्रतिस्पर्धामा क्वाटरफाईनलसहित २ पटक म्यान अफ द म्याच चुनिएका खेलाडी हुन ।
रोमेलु लुकाकु, बेल्जियमः बेल्जियममा हजार्ड जस्ता प्रभावशाली खेलाडी छन् । तर, अग्रपंत्तिमा परिणाम उल्याउन सक्ने खेलाडी अर्कामा पनि छन् । ती हुने रोमेलु लुकाकु । भिन्सेट कम्पनी, विट्सेल, फेलानी, कारास्को, हजार्डले फ्रान्सलाई दबाब दिँदा सेन्ट्रल फरवार्डमा खेल्ने लुकाकुले फ्रान्सलाई नतिजा सुम्पिन बाध्य बनाउँने क्षमता राख्छन् । बेल्जियमको अन्तवार्पमा २५ बर्षअघि जन्मिएको लुकाकु २०१० देखि बेल्जियमको राष्ट्रिय टिमका लागि ७३ वटा म्याचमा ४० गोल गरेका छन् । हालसम्म जारी वर्ल्डकप ४ गोल गर्दै एक गोलका लागि पास निकालिसकेका छन् । उनी विश्वकपको पाँच प्रतिस्पर्धामा १ पटक म्यान अफ द म्याच चुनिएका छन् । बललाई सिघ्रअघि बढाउँने ठुलो चेहडाका खेलाडी लुकाकुले फ्रान्स विरुद्ध गोल गर्न सक्छन् ।